Edgeless စျေး - အွန်လိုင်း EDG ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Edgeless (EDG)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Edgeless (EDG) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Edgeless ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $1 422 082.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Edgeless တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Edgeless များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
EdgelessEDG သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0133EdgelessEDG သို့ ယူရိုEUR€0.0112EdgelessEDG သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0101EdgelessEDG သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0121EdgelessEDG သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.119EdgelessEDG သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0835EdgelessEDG သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.294EdgelessEDG သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0494EdgelessEDG သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0176EdgelessEDG သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0184EdgelessEDG သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.297EdgelessEDG သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.103EdgelessEDG သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0711EdgelessEDG သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.995EdgelessEDG သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.24EdgelessEDG သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0182EdgelessEDG သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0199EdgelessEDG သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.414EdgelessEDG သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0924EdgelessEDG သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.4EdgelessEDG သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩15.75EdgelessEDG သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦5.05EdgelessEDG သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.975EdgelessEDG သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.368
EdgelessEDG သို့ BitcoinBTC0.000001 EdgelessEDG သို့ EthereumETH0.00003 EdgelessEDG သို့ LitecoinLTC0.00022 EdgelessEDG သို့ DigitalCashDASH0.000128 EdgelessEDG သို့ MoneroXMR0.00014 EdgelessEDG သို့ NxtNXT0.949 EdgelessEDG သို့ Ethereum ClassicETC0.00183 EdgelessEDG သို့ DogecoinDOGE3.68 EdgelessEDG သို့ ZCashZEC0.000132 EdgelessEDG သို့ BitsharesBTS0.505 EdgelessEDG သို့ DigiByteDGB0.486 EdgelessEDG သို့ RippleXRP0.0431 EdgelessEDG သို့ BitcoinDarkBTCD0.000446 EdgelessEDG သို့ PeerCoinPPC0.0467 EdgelessEDG သို့ CraigsCoinCRAIG5.89 EdgelessEDG သို့ BitstakeXBS0.552 EdgelessEDG သို့ PayCoinXPY0.226 EdgelessEDG သို့ ProsperCoinPRC1.62 EdgelessEDG သို့ YbCoinYBC0.000007 EdgelessEDG သို့ DarkKushDANK4.15 EdgelessEDG သို့ GiveCoinGIVE28 EdgelessEDG သို့ KoboCoinKOBO2.89 EdgelessEDG သို့ DarkTokenDT0.0122 EdgelessEDG သို့ CETUS CoinCETI37.34